ချင်းပြည်နယ်၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးတွင်သုံးရန် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်များ ပံ့ပိုး? - Yangon Media Group
ချင်းပြည်နယ်၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးတွင်သုံးရန် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်များ ပံ့ပိုး?
ဟားခါး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁
ချင်း ပြည်နယ်၏ သဘာဝဘေးအန္တ ရာယ်ကာကွယ်ရေးတွင် အသုံးပြု နိုင်ရန် အမျိုးသားသဘာဝ ဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော် မတီက မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော် တော်ဆိုင်ကယ်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်း ပေးထားကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
အမျိုးသား သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင် နရီဗန်ထီးယူ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သဘာ ဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှုကော်မတီအတွက် Toyota Landcruicer Wagon တစ်စီး၊ Toyota Hilux Doublecap တစ် စီးထုတ်ပေးထားပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနအတွက် Toyota Landcruicer Wagon နှစ်စီး၊ Toyota Hilux Doublecap ခြောက်စီး စုစုပေါင်း မော်တော်ယာဉ် ရှစ်စီးနှင့် မော် တော်ဆိုင်ကယ် Honda-Wave 110 အမျိုးအစား ၂၅ စီးတို့ကို ရ ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်က သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် ရင် သွားရေးလာရေး အရမ်းခက် ခဲ့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ အ ရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် (IRM) နဲ့ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ကနေ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ် အတွက် မော်တော်ယာဉ်နဲ့ မော် တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို ထောက်ပံ့ ထားတာရှိပါတယ်” ဟု ချင်းပြည် နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင် ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦး စီးမှူး ဦးမြင့်အောင်ကပြောသည်။
ဆိုင်ကယ် ၁၇ စီးကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည် နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင် ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် ငါးစီး၊ ခရိုင်အဆင့်တွင် ခရိုင်တစ်ခုလျှင် တစ်စီးနှုန်းဖြင့် ခရိုင်သုံးခုအတွက် သုံးစီး၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မြို့နယ် ကိုးမြို့နယ်အတွက် ကိုးစီးတို့ကို ခွဲ ဝေသုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
YBS ကတ်စနစ် ကားသစ်အစီး ၂၀၀၀ တွင် စတင်တပ်ဆင်မည်